Sendoso - တိုက်ရိုက်မေးလ်ဖြင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်း၊ Martech Zone
ငါအဓိက SaaS ပလက်ဖောင်းမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တုန်းကဖောက်သည်တွေရဲ့ခရီးကိုရှေ့ဆက်ဖို့ထိရောက်တဲ့နည်းတစ်နည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ်မှတ်ထားတဲ့ဖောက်သည်တွေကိုထူးခြားပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုပို့ခြင်းဖြစ်သည်။ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတစ်ခု၏ကုန်ကျစရိတ်သည်စျေးကြီးသော်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အကျိုးအမြတ်ရရှိခဲ့သည်။
စီးပွားရေးခရီးသွားလာခြင်းနှင့်ဖြစ်ရပ်များကိုဖျက်သိမ်းခြင်းတို့ကြောင့်စျေးကွက်သမားများသည်သူတို့၏အလားအလာကိုရောက်ရှိရန်အကန့်အသတ်ရှိသောရွေးချယ်စရာများရှိသည်။ ကုမ္ပဏီများသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်လိုင်းများမှတဆင့်ပိုမိုဆူညံသံများမောင်းနှင်နေသည်ဟူသောအချက်ကိုမပြောပါနှင့်။ Direct mail သည်အထက်သို့တက်ခြင်းဖြင့်ဆူညံသံထက်မြင့်တက်နိုင်သည် အီးမေးလ်၏တုံ့ပြန်မှုနှုန်း 30x.
သင်သည်ပရိသတ်ကိုကြည်နူးဖွယ်၊ မြင်သာထင်သာ ရှိ၍ အကျိုးသက်ရောက်စေသည့်မက်လုံးများဖြင့်ဆွဲဆောင်နိုင်ပါကခရီးကိုရှေ့သို့တိုးနိုင်သည်။ Sendoso သည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်သည် - ထုတ်ကုန်ရွေးချယ်ခြင်းမှအလိုအလျောက်၊ ငွေသွင်းခြင်းပေါင်းစည်းခြင်းအထိ၊ ဒီမဟာဗျူဟာအဖြစ်လူသိများသည် တိုက်ရိုက်မေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်.
ရလဒ်များသည်အထင်ကြီးစရာကောင်းပြီး Sendoso ဖောက်သည်များအောင်မြင်ကြသည် -
အခွင့်အလမ်းနှုန်းဝင်ငွေ 22% တိုး
အစည်းအဝေးများသို့ပြောင်းလဲမှုများတွင် ၃၅% တိုးလာသည်
ပေးပို့သည့် packages များမှ ၆၀% တုံ့ပြန်မှုနှုန်း
အပေးအယူမှဝင်ငွေအပေါ် 450% ပြန်လာပိတ်လိုက်
အနီးကပ်နှုန်း 500% တိုး
လိပ်စာမှန်ကန်မှုကို အသုံးချ၍ Sendoso သည်သင်၏အလားအလာ (သို့) ဖောက်သည်များအားစိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်တစ်ခု၊ egift၊ ပျက်စီးနိုင်သောပစ္စည်းများသို့မဟုတ် Amazon မှထုတ်ကုန်တစ်ခုခုကိုပေးပို့နိုင်သည်။ ၎င်း platform သည်အဓိကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ပလက်ဖောင်းများ၊ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးပလက်ဖောင်းများ၊ CRMs၊ ဖောက်သည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပလက်ဖောင်းများနှင့်အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးစျေးကွက်များနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
သင်၏ ၀ ယ်သူ၏ခရီးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေပါ
အသိအမြင် - 3D ရေဒီယိုကတ်များ၊ တံဆိပ်တပ်ထားသောမှတ်စုစာအုပ်များ၊ တုတ်အိတ်များ၊ ခရီးဆောင်အားသွင်းစက်များသို့မဟုတ်အခြားလူသုံးများသောပစ္စည်းများကိုလူရေဒါသို့ပေးပို့ရန်။
ဆုံးဖြတ်ချက် - သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ပါ ၀ င်သည့်အရွယ်အစားကြီးမားသည့်စာပို့သူများသို့မဟုတ်အရည်အသွေးမြင့်ဂျာကင်များပေးပို့ခြင်းဖြင့်သင်၏ပစ်မှတ်အကောင့်များနှင့်ထိရောက်စွာထိတွေ့ဆက်ဆံပါ။
ထည့်သွင်းစဉ်းစား - ပရိသတ်ကိုစိတ်ကြိုက်ဗီဒီယိုပို့သူများသို့မဟုတ်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ပါသောချိုမြိန်စွာဖြင့်စိတ် ၀ င်စားပါ။
တံခါးဖွင့် - တစ်စုံတစ် ဦး ၏စားပွဲခုံပေါ်သို့သာ ၀ င်ရောက်ပြီးအစားထိုး ၀ ယ်ယူထားသောအမေဇုံမှစာတိုလေးတစ်ခုဖြင့်သူတို့စာတိုက်ပုံးအတွင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းအစားရယူပါ။
Deal Accelerators များ - သင်၏ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုခိုင်မာစေရန်နှင့်သင်၏ကုမ္ပဏီတံဆိပ်နှင့်လိုက်ဖက်သည့်စပျစ်ရည်ပုလင်းနှင့်ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုများကိုအပြီးသတ်ပြုလုပ်ပါ။
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သူများ - ရုံးခန်းတစ်ခုလုံးမျှဝေနိုင်သောမယားစကား၊ ကွတ်ကီ (သို့) အခြားချိုမြိန်သည့်အပြုအမူများကိုပေးပို့ခြင်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူများစွာနှင့်တစ်ပြိုင်နက်ဆက်သွယ်ပါ။
အွန်လိုင်းအော့ဖ်လိုင်းပါဝင်မှုအတွက်ဆော့ဗ်ဝဲကုမ္ပဏီဖြစ်သော Sendoso ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ပိုက်လိုင်းဖြင့်ဒေါ်လာ ၁၀၀ နှင့်ဝင်ငွေဒေါ်လာ ၃၀ တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတခုက လက်ဆောင်ကဒ်၊ ချိုမြိန်စွာဆက်ဆံမှု၊ Total Economic Impact infographic၊ Total Economic Impact အလုပ်အမှုဆောင်အကျဉ်းချုပ်နှင့်လက်ရေးစာတိုစသည့် ABM အကောင့်များသို့ bundle ၃၄၅ ခုကိုပေးပို့ခဲ့သည်။
ကုန်ထုတ်စွမ်းအားရှိသောပေါင်းစပ်မှုများသည် Salesforce၊ Salesforce Marketing Cloud, Salesforce Pardot, Eloqua၊ HubSpot, အဝေးရောက်, Salesloft, SurveyMonkey, သြဇာ, Shopify နှင့် Magento ။
၁: ၁ စိတ်ကြိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောအမှတ်တံဆိပ်အသိအမြင်ကိုမည်သို့ဖန်တီးနိုင်ပြီးသင်၏ Post-COVID ပိုက်လိုင်းတည်ဆောက်ပုံကိုပိုမိုလေ့လာလိုပါက Sendoso သရုပ်ပြကိုတောင်းခံပါ။
Sendoso Demo တောင်းခံပါ
Tags: ဆွဲဆောင်hubspot ဖြစ်သည်သြဇာmagentoအဝေးရောက်ရောင်းသူရောင်းသူSalesfore စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတိမ်တိုက်အရိယာshopifySurveyMonkey